INDLELA YOKUXUBA KUNYE NOKUTSHATISA IMIPHEZULU YEETAFILE ZEGRANITE - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Indlela yokuxuba kunye nokuTshatisa imiphezulu yeetafile zeGranite
Nasi isikhokelo sethu sendlela yokuxuba kunye nokuthelekisa imiphezulu yeetafile zegranite kubandakanya ukusebenzisa imibala emibini eyahlukeneyo yegranite, izikimu zombala ezithandwayo kunye neendibaniselwano ezahlukeneyo. Ukuxuba kunye nokuthelekisa imiphezulu yeetafile zegranite ngaphakathi ekhitshini elifanayo lukhetho oluqhelekileyo kwiprojekthi yakho yohlengahlengiso elandelayo.
Ukuyifumana ngokuchanekileyo kufuna ulwazi ngemibala yethiyori. Uya kudinga ukukhetha umdibaniso wombala osisiseko kunye nowesibini osebenza ngokuhombisa kwakho okhoyo.
Kuya kufuneka uyazi ukuba ungathelekisa njani ngokwahlukileyo iintlobo imiphezulu yeetafile lenyengane . Oku kubalulekile xa kufika ixesha lokukhetha i-slabs eziza kusebenza kakuhle kunye.
Kweli nqaku, siza kugubungela iziseko zokuvavanya igranite kunye nokusebenzisa ithiyori yombala kumxube wakho kunye neprojekthi yeplanethi yokuthambisa. Emva kokufunda, uya kuba ukulungele ukukhetha ngokuzithemba i-slabs yakho kwaye wenze le ndlela intsha yoyilo.
Isoftware yekhabhinethi yoyilo
Sebenzisa Iitafile zeGranite ezimbini ezahlukeneyo ekhitshini
Imibala yeComputer Countertop Colors
Imibala yeC Triadic Kitchen Countertop
Iindidi zeGranite zokuSetyenziselwa iiTafile zeToni ezimbini
Umgaqo omnye onzima kwaye okhawulezayo omele ukuwusebenzisa, nokuba ukhethe siphi na isicwangciso? Ungaze udibanise inyengane kwikhawuntara efanayo.
Amacwecwe amabini ekhonkrithi eyahlukileyo abelana ngomthungo awufezekisi umxube kunye nokubukeka komdlalo. Bajongeka nje ngokungalinganiyo, ngokungathi usebenzise nantoni na elele macala onke. Ngapha koko, jonga kwakhona usebenzisa esi sicwangciso ngaphandle kokuba ikhitshi lakho linenye yezi ndlela zoqwalaselo:
● Ubuncinci ikhawuntari enye kunye nesiqithi, OKANYE
● Ubuncinane imiphezulu yeetafile ezintathu
Ukuba unezinto zokubala ezimbini ezahlulwe eludongeni, kwisixhobo, okanye kwikhabhathi, usebenzisa umxube kunye nesicwangciso somdlalo kunokwenzeka, kodwa kunzima ukukhupha.
Olunye ukhetho olunokubakho kukukhetha imiphezulu yeetafile enemibala engafaniyo, enje imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe ngemithambo engwevu yomphezulu womhlaba, kunye negranite engwevu enemithambo emhlophe yenye.
Ngomnye wolungelelwaniso oludweliswe apha ngasentla, nangona kunjalo, ukwimeko efanelekileyo yokuqhubela phambili ngokudibanisa kunye nokuyila itafile yecomputer.
Isikhokelo esihle sokuxuba kunye nokuthelekisa kukhetha i-countertop ephambili yokugubungela malunga ne-⅔ yommandla. Ezishiyekileyo kufuneka zigutyungelwe yinto yesibini.
Zonke iikhitshi zahlukile, kwaye musa ukwahlula ngokucocekileyo zibe kwisithathu. Sebenzisa esona sigwebo sakho silungileyo kunye nengqondo yobuqu yokulinganisa ukufumanisa ibhalansi esebenza kwindawo yakho.
Impumelelo yesisombululo sokudibanisa kunye nomdlalo ixhomekeke ekufumaneni indibaniselwano yombala ehambelanayo. Iyahambelana igama elithi theorists umbala osetyenziswayo ukuchaza izikimu zemibala ezithandekayo emehlweni.
Zintathu iindlela zemibala ezihambelanayo onokuzisebenzisa ngokulula ukukhupha umxube kunye nokuthelekiswa kwetrokethi ekhitshini lakho; ehambelanayo, e-triadic, okanye ye-monochromatic. Makhe sihlolisise.
Ukuthwala iskimu sombala esincedisayo kumxube wakho kunye nomdlalo wokuphambana wegranite kuqala ngento encinci yombala. Mhlawumbi ukhe wadibana nevili lemibala kwiklasi yezobugcisa esikolweni.
Imibala ehambelanayo ihlala ijongane kwivili lemibala, kwaye yenze indibaniselwano ethe kratya eya kwenza ukuba yomibini imibala ikhangeleke ngakumbi, ikhanya, kwaye idlamkile.
Ukuba ufumene isiqwenga segranite esinqabileyo osithandayo, iskimu sombala esincedisayo yeyona ndlela ifanelekileyo yokuyibonisa.
I-Orbicular granite okanye i-rapakivi granite yimizekelo yezinto ezinqabileyo, ezifunwa kakhulu emva kokuba zifunwa kwaye zifanelwe kukuqwalaselwa. Bona eminye imizekelo iitafile zekhitshi ezahlukileyo Apha.
Ukukhetha izinto eziziiprayimari neziziisekondari ezinombala ofanayo wesiseko, ezichazwe kwimibala eyahlukeneyo, imibala, okanye iithowuni ziya kuzisa ubuhle kunye nokucokiswa ekhitshini lakho. Ungayidlala ikhuselekile ngokuthintela i-monochrome kwii-countertops, okanye uyandise kwiikhabhathi ukuze ujonge ngakumbi. Nokuba yeyiphi na indlela, iziphumo ziyaqinisekiswa ukuba zodidi kwaye zibukeka zintle.
Imibala yeC Triadic Countertop Colors
Iskimu sombala wesithathu senziwe ngemibala emithathu elinganayo ukusuka kwelinye kwivili lemibala.
Umahluko omncinci kunemibala ehambelanayo, kodwa ifuthe eliphezulu kunoyilo lwe-monochrome, izikimu zombala we-triadic kulula ukuzikhupha kwaye zikhangeleke zintle. Umbala omnye ubalaseleyo, ngelixa eminye imibala emibini ibonelela ngokulinganisela.
Kusenokubakho umbala obalaseleyo ekhitshini lakho. Kule meko, sebenzisa ivili lemibala ukufumana iindawo ezimbini kwivili ezilinganayo ukusuka kumbala wokuqala, kwaye ujonge igranite kulezo hues.
Kukho amagama amabini oza kudibana nawo xa kuvavanywa igranite: inqanaba, kunye nenqanaba.
Inqanaba ibhekisa kumbala- hayi kuphela ukuba sisityebi okanye sidlamkile kangakanani, kodwa nokuba kunqabile kangakanani. Ezi zinto zilinganiswe kwisikali ukusuka kwinye ukuya kwisixhenxe, ezisixhenxe zibonisa ezona zinqabileyo nezityebileyo imibala lenyengane .
IBakala isetyenziselwa ukubonisa umgangatho wolwakhiwo, kubandakanya ukuba zingaphi iintsilelo ezikhoyo elityeni. I-granite ekumgangatho ophantsi iya kuba nemingxunya emininzi kunye nokuqhekeka, ngelixa i-granite ekumgangatho ophezulu kufuneka ingabinayo kwaphela. Igranite ekumgangatho ophakathi iya kuba yindawo embindini.
Ngokubanzi, inqanaba eliphantsi, inqanaba lenyengane enye yenziwe kwangaphambili kwaye ikumgangatho osezantsi. Inqanaba lesibini, igranite yaphakathi-kwebakala lukhetho oluqhelekileyo kumphakamo wokuthambisa wegranite.
Igranite ekumgangatho ophakamileyo ekwinqanaba lesithathu okanye ngaphezulu yimveliso yeprimiyamu ebandakanya uninzi lwezona zinto zinqabileyo nezintle kakhulu zokwenza igranite.
Njengemibala yepeyinti, abathengisi basebenzisa amagama achazayo ukuchonga igranite abayithengisayo. Ezinye zeetafile zegranite ezifanelekileyo zokusebenzisa umxube kunye nekhitshi yomdlalo zezi:
Igolide yeGreat Granite
I-brown, grey, tyheli kunye negolide ejikelezayo kunye kule greyite yepremiyamu. Ingeniswa kumazwe aseBrazil.
IBrazil Granite yaseBrazil
iilokhwe zomtshato ezimfusa ziyathengiswa
IBrazil ithumela ngaphandle eli litye liluhlaza mnyama ngemithambo emnyama. Le nyengane inokuchukumiseka ngokukhethekileyo xa kusenziwa intambo engxibileyo. Bona Okuninzi Iindidi zemiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza Apha.
Imithambo ebanzi ebomvu, yegolide, kunye neorenji iyazulazula ijet emnyama yeli litye.
Etshatile evela e-Italiya, eli litye linamachaphaza kunye nemithambo emfusa kunye nengwevu exutywe nomdaka nomnyama. Sebenzisa imfusa njengenye yento yeskimu sombala wesithathu ukubonisa le patheni yahlukileyo.
ILava Jewel Granite
Eli litye limangalisayo livela eIndiya libonakaliswa yimithambo engwevu nemaroon ehamba ngasemva ebomvu-emdaka.
IBlue Pearl GT Granite
Ngokufanelekileyo i-granite evela eNorway, le ntlukwano yegranite ijongeka njengeempuphu zekhephu eziwa esibhakabhakeni ngongcwalazi. Imvelaphi eblowu ithulwe ngombala omhlophe, ongwevu, okanye isilivere yamatye, le granite inokubonakala ngathi yintsimbi xa icwebezelwe kakhulu.
Nokuba yeyiphi igranite oyikhethayo, qiniseka ukuba izinto zakho eziziiprayimari neziziisekondari zikwibanga elifanayo, kwaye hayi ngaphezulu kwamanqanaba amabini ngokwahlukeneyo. Zonke ii-countertops ekhitshini lakho nazo kufuneka zibe neprofayili efanayo.
Xa ufumene igranite ehambelana neskimu sakho sombala, konke okushiyekileyo kukwenza kukuseta ucwangciso. Uyakubonisa uyilo lwakho lwekhitshi ezimbini ngaphandle kwethutyana.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela igalari yethu I-quartzite vs imiphezulu yeetafile kweli phepha.
Isoka lithanda iikowuti ngaye
Iingoma zothando zespanish kuye
izimvo zomtshato wesibini
amakhonkco omtshato wokufihla yena kunye naye
Isipho seminyaka engama-50 sabazali